भिडियो लिक भएपछि निशाले सार्वजनिक गरिन ११ हट तस्वीर ! - Sagarmatha Online News Portal
भिडियो लिक भएपछि निशाले सार्वजनिक गरिन ११ हट तस्वीर !
एजेन्सी । नेपाली मूलकी भारतीय टिकटक नम्बर वान स्टार निशा गुरागाईको शारिरीक सम्पर्क गरेको भिडियो लिक भएपछि ११ हट तस्वीर सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
आफ्नै ब्वाईफ्रेण्डसँग शारिरीक सम्पर्क गरिरहेको भिडियो लिक भएपछि उनी एक्कासी भाइरल भएकी थिइन् । भिडियो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि निशा केहि दिन तनावमा रहेको बताएपनि आफ्नै ब्वाईफ्रेण्डसँग शारिरीक सम्पर्क गरेकाले आफूलाई सामान्य स्थितिमा आउन सहज भएको समेत उनले बताएकी छिन् ।
एक भिडियो सन्देमा उनले आफू नेपाली भएकोमा गर्व लागेको बताएकी छिन् । व्यत्तिगत मनोरञ्जनका लागि कैद गरिएको भिडियो मोबाईलमै भए पनि ह्याकरहरुले कुनै एपको प्रयोग गरी उक्त भिडियो लिक गरिदिएको समेत आरोप लगाएकी छिन् ।
‘म र मेरो प्रेमीले शारीरिक सम्पर्क गर्दा उक्त भिडियो खिचेका थियौं । यो नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो,’ उनले भनिन्, ‘यो भिडियो भाइरल गर्ने उद्धेश्यले नभै व्यक्तिगत रमाइलोका लागि खिचेका हौं । तर अहिले विभिन्न पोर्न साईट र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन ।’
ब्वाईफ्रेण्डसँग शारिरीक सम्पर्क गरेको भिडियो भाईरल भएपछि टिकटक स्टार निशा गुरागाईले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको हट तस्वीरहरु ।
Published On: १५ असार २०७७, सोमबार
दोलखा भीमसेनमा फेरि पसिना आयो, वैज्ञानिक भन्छन्– अनिष्टको अफवाहमा नलागौं
कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे :संसदको नियमित अधिवेशन अब सुरु हुन्छ